Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada oo doortay Guddoomiye iyo ku-xigeen (Yaa kusoo baxay?) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xubnaha Guddiga xalinta Khilaafaadka ee Heer Federaal ayaa maanta doortay Guddoomiye cusub, kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Afisiyoone ee magaalada Muqdisho.
Kulanka Guddiga waxaa aadiray 21 xubnood, waxaan Xilka Gudoomiyaha Guddiga xalinta Khilaafaadka waxa isku soo sharaxay:Cabdilahi Abyan Nuur iyo Cali axamuud Faarax (Cali Zeko)
Natiijada Doorashada gudoomiyaha ayaa noqotay inuu C/llaaahi Abyan Nuur helay 14 cod, halka Cali Maxamuud Faarah ( Cali Zeko) uu helay 7 cod.
MWaxaa C/llaahi Abyan Nuur sidaas loogu doortay Gudoomiyaha cusub ee Guddiga xalinta Khilaafaadka ee Heer Federaal.
Sidoo kale xilka Guddoomiye Ku-xigeenka oo ay ku tartamayeen musharixiinta kala ah Maxamed Ibraahim Barre iyo Axmed Yuusuf Maxamud ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Ibraahim Barre oo oo helay 15-cod.
Guddoomiyaha wuxuu hore uga tirsanaa Guddigii khilaafka ka dhashay oo uu mar kale madax u noqday, wuxuuna xilal wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta kasoo qabtay dowladihii hore. Halka guddoomiye ku xigeenka uu soo noqday Guddoomiyaha Gobolka SH/Dhexe.
Guddiga Xalinta khilaafaadka
Previous articleGuddiga Doorashada Puntland oo tartan la’aan Muqdisho ku doortay Guddoomiye iyo ku xigeen (Akhriso)
Next articleTaliska Mareykanka ee Afrika oo Gaadiid Gaashaaman ku wareejiyey Ciidamada Xoogga Daka (Sawirro)